I-Sony Xperia 1: Imininingwane, intengo nokwethulwa | Izindaba zamagajethi
U-Eder Esteban | | AmaSelula, I-Telephony
AbakwaSony bahlele umcimbi wokwethula namhlanje ekuseni eMWC 2019. Kuyo, umkhiqizi odumile usishiyile ngama-smartphones amaningi. Owokuqala wabo yi-Sony Xperia 1, imodeli yayo entsha yezinga eliphezulu. Ifoni eza negama elisha, ngoba umkhiqizo uthathe isinqumo sokuqamba kabusha amabanga ayo ama-smartphones alo nyaka. Kungumzamo omusha wokuqalisa kabusha ukuthengiswa kwamadivayisi ayo.
Le Sony Xperia 1 ivelele ikakhulukazi esikrinini sayo, ngesilinganiso esingu-21: 9. Umkhiqizo unciphise imiphetho yaba ngaphezulu, ngaphezu kokukhulisa isikrini. Kwethulwa njenge-smartphone ekahle yokusebenzisa okuqukethwe kwe-multimedia. Yini enye esingayilindela kuleli banga eliphezulu?
Njengoba sibona kwezinye izinhlobo ezethulwe ku-MWC 2019, iza neprosesa enamandla kakhulu emakethe. Ngaphezu kwalokho, sithola ifayela le- kathathu ikhamera yangemuva kudivayisi, phakathi kwezinye izici. Konke okudingayo ekugcineni okuphezulu kwamanje ku-Android. Ngabe kuzosiza ukubuyisela u-Sony phezulu emakethe?
1 Imininingwane Sony Xperia 1
2 I-Sony Xperia 1: Ingaphezulu entsha yomkhiqizo yebanga
Imininingwane Sony Xperia 1
Isikrini besiyisici esibalulekile kulesi sizukulwane esisha sama-smartphones akwaSony. I-Sony Xperia 1 ifika nephaneli ye-OLED, ngesilinganiso esishiwo esingu-21: 9, ngokusho kwenkampani okuvumela ukuthi ubuke okuqukethwe futhi usebenzise izinhlelo zokusebenza ngokujwayelekile. Okuqukethwe okuningi kuzingxenyekazi ezifana neNetflix sekuvele kunale fomethi, noma ukusekelwa. Ngakho-ke kungenzeka. Lokhu ukucaciswa kwayo okugcwele:
Imininingwane ye-Sony Xperia 1
I-Modelo Xperia 1
Isistimu yokusebenza I-Android 9.0 Pie
Isikrini I-OLED engu-intshi engu-6.5 enesinqumo esingu-4K + nesilinganiso esingu-21: 9
Umseshi I-Snapdragon 855
GPU I-Adreno 630
Isitoreji sangaphakathi I-128GB (iyanwetshwa ifike ku-512GB nge-MicroSD)
Ikhamera engemuva I-12 MP f / 1.6 OIS Dual Pixel + 12 MP f / 2.4 I-angle ebanzi + 12 MP f / 2.4 zoom Optical
Conectividad I-Bluetooth 5.0 Dual SIM WiFi 802.11 a / c i-USB-C WiFi MIMO
Ezinye izici Isifundi seminwe ohlangothini lwe-NFC Protection IP68 Dolby Atmos
Ibhetri I-3.330 mAh enenkokhiso esheshayo
Ubukhulu 167 x 72 x 8.2 mm
Isisindo I-180 amagremu
Intengo Akuqinisekisiwe okwamanje
I-Sony isengenye yezimpawu ezimbalwa lokho namanje ungasebenzisi i-notch noma imbobo ezikrinini kumafoni abo. Ngenkathi iningi lemikhiqizo ye-Android, kufaka phakathi iSamsung, isivele yethula imodeli, amaJapan agcina imigqa yawo yokwakha kuma-smartphones awo, yize eguqule kakhulu isilinganiso sale divayisi.
Umsindo ngesinye isici esibalulekile sefoni. I-Sony Xperia 1 iza nezipikha ze-stereo, ngaphezu kokuba ne- ukusekelwa kwezinga leDolby Atmos. Ngenxa yalokhu, kuzokwazi ukujabulela umsindo ogwilizayo lapho usebenzisa okuqukethwe kudivayisi. Futhi, bafuna ukugcizelela ukuthi iyi-smartphone enhle uma kukhulunywa ngokubuka amavidiyo, uchungechunge noma ukulalela umculo okuyo.
I-Sony Xperia 1: Ingaphezulu entsha yomkhiqizo yebanga
Ngaphakathi kwefoni, iprosesa enamandla kunazo zonke ye-Android manje isilindele, i-Snapdragon 855. Ngokungafani nezinye izingcingo ezethulwe eMWC 2019 kusetshenziswa le processor, ucingo lomkhiqizo waseJapan alufiki nokusekelwa kwe-5G. Akukho lutho olwashiwo ngokufika kwe-5G kumadivayisi omkhiqizo kulo mcimbi. Yize kwaziwa ukuthi inkampani isebenza kuwo.
Amakhamera angenye yamandla kule Sony Xperia 1. Amalensi amathathu angemuva, inhlanganisela ye-engeli, i-angle ebanzi ne-telephoto, wonke lawa angama-12 MP yilokho esikutholayo. Ubuhlakani bokufakelwa bukhona, ukusiza ukuthuthukisa ukutholwa kwesigcawu, ngaphezu kokungeza izindlela ezimbalwa zokuthatha izithombe kumakhamera. Ngekhamera yangaphambili yocingo bakhethe inzwa eyodwa ye-8 MP, lapho kwenziwe ngayo intuthuko.
Indawo inzwa yezigxivizo zeminwe ithembisa ukuba yisihloko sengxoxo phakathi kwabasebenzisi. Akukangeni esikrinini, njengoba kungenjalo neminye imikhiqizo. Asikwazi ukuyithola ngemuva kwedivayisi. U-Sony wethule le sensor yezinhlamvu zeminwe kolunye uhlangothi lwefoni. Isinqumo esingaqinisekisi wonke umuntu. Yize kuzofanele sahlulele ngokususelwa ekusebenzeni kwesenzwa sezigxivizo zeminwe usuku nosuku.
Okwebhethri, kusetshenziswe eyodwa enamandla angama-3.330 mAh. Ayilona ibhethri elikhulu kunawo wonke, kepha ngokuhlangana neprosesa enayo, evelela ukusebenza kwayo kahle kwamandla, ngaphezu kokuba nephaneli ye-OLED, evamise ukusebenzisa kancane, kufanele yanele ukwazi ukusebenzisa isiphetho esiphakeme usuku nosuku.
Esethulweni sale Sony Xperia 1 akukho okukhulunyiwe mayelana nokwethulwa kwayo kwemakethe. Ukuphela okuphezulu kuzotholakala kunguqulo eyodwa ngokuya nge-RAM nokugcina. Ukukhethwa kwemibala kuzoba kubanzi ngandlela thile, ukwazi ukukhetha phakathi komnyama, ompunga, omhlophe nonsomi.
Sithemba ukuthi sizokwazi ukuthola imininingwane ngokwethulwa kwemakethe ephezulu yomkhiqizo kungekudala. Akufanele kuthathe isikhathi eside kuze kwaziwe okuningi ngokwethulwa kwayo nentengo yayo yokuthengisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » I-Sony Xperia 1: Ukuphela okusha okusha kukaSony manje sekusemthethweni